Huawei dia nanambara ny Smartwatch Watch GT vaovao tsy misy Android Wear | Androidsis
Huawei Watch GT dia iray amin'ireo fitaovana efa nambara amin'izao fotoana izao ny orinasa sinoa. Smartwatch vaovao izay miavaka amin'ny tsy fananany Android Wear sy ny fanarahana ny làlana navelan'ny marika hafa toa an'i Samsung.
Mampiavaka ity smartwatch Huawei vaovao ity ny bateriny izay mamela hatramin'ny 2 herinandro, ary miaraka amin'ny fahaizana mahatratra 30 andro raha mihinana kely kokoa isika. Saingy tsy noho io antony io ihany no miavaka ny Huawei Watch GT.
Smartwatch avy amin'ny marika Android tsy misy Android Wear
Toa ny G lehibe sisa tavela raha tsy misy mpilalao hafa ao amin'ny sehatra Android hampiasa ny kinova nohamafisiny ho an'ny fitafiana antsoina hoe Android Wear. Ary izany ve ilay Huawei Watch GT vaovao mampiasa ny dikany manokana antsoina hoe LiteOS ary izay miavaka amin'ny fampihenana ny fanjifana bateria an-telefaona.
Raha ao an-tsaina izany dia efa afaka mahatakatra bebe kokoa ny fomba Huawei Nirehareha momba ireo 2 herinandro ireo izy fiainana bateria miaraka amin'ny fanjifana antonony. Fa ankoatry ny batterie dia mila manana famantaranandro marani-tsaina ihany koa ianao izay manana efijery mirefy 1,39 santimetatra ary misy bokotra 2 eo anilany.
Ity efijery ity dia arovan'ny vatana vy tsy misy fangarony ho an'ny famantaranandro iray izay miavaka amin'ny famolavolana azy ary noho izy tsy lehibe lehibe hitantsika tamin'ny maodely hafa an'ny Huawei iray ihany.
Izany koa dia manana GPS sy Galileo raha hametrahana ny toerana. Voalaza fa, tadidio fa raha tianao haharitra 30 andro izany dia tsy maintsy manana ny GPS sy ny pulse ianao. 2 herinandro ny fiainana bateria ho an'ny fampiasana izay ampidirinay ny famakiana fitiliana tsy tapaka sy 19 minitra isan-kerinandro. Ary farany, 22 ora raha mampihetsika ny GPS sy ny famonoana mitohy isika.
Ny Huawei Watch GT dia famantaranandro marani-tsaina ihany koa natokana ho an'ny fanatanjahan-tena miaraka amin'ny fomba isan-karazany amin'ny hazakazaka, bisikileta, lomano, fitsangantsanganana ary mandeha. Toy ny maodely Xiaomi, ny Mi Band 3, azonao atao ny manisa ny ora fatoriana.
El vidin'ny Huawei Watch GT ao amin'ny kinova Sport mahatratra 199 euro. Ary ny kinova kilasika dia mahatratra hatrany amin'ny 249 euro, ho an'ny famantaranandro marani-tsaina avy amin'ny Android Wear ary manantena ny hanana fanatrehana amin'ny varotra noho io fiainana bateria io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Huawei Watch GT dia rindrambaiko vaovao tsy misy Android Wear
Huawei Mate 20 RS Porsche Design: Namboarin'ny finday ny rendez-vous